lundi, 21 octobre 2019 19:29
Ambatondrazaka: Ramatoa iray mpatory an-tsena maty ho azy
Hitan'ny olona nangovitra ity ramatoa ity androany maraina. Nisy nanome firakotra azy, nihevitra fa nangatsiaka izy. Fotoana fohy taorian’izay dia tapitra ny ainy.
Manan-janaka iray, lahikely fito taona ilay ramatoa, any am-pigadrana eto Ambatondrazaka ny vadiny. Mangataka no ahitan’ny olona azy.
Vao andro vitsy lasa izay no nisy lehilahy iray 60 taona eo koa, namoy ny ainy teny amoron-dalana teto Ambatondrazaka. Samy manan-kavana eto, na ity vehivavy namoy ny ainy androany ity, na ilay rangahy, saingy mety samy manana ny manahirana azy, na eo aza ilay hoe : ny adalan’ny hafa ihomehezana fa ny an’ny tena tafian-damba.
lundi, 21 octobre 2019 19:26
Solika: Tsy hiakatra ny vidiny, mbo manana tahiry 21 andro i Madagasikara
Misy ny solika, tsy hiakatra ny vidiny, ka tsy misy tokony hampitaintaina ny mpanjifa, hoy ny fanamafisana avy eo anivon’ny OMH (Office Malgache des Hydrocarbures). Mbola manana tahirin-tsolika mandritra ny 21 andro i Madagasikara, hoy hatrany ny fanazavana.
Toby mpaninjara solika miisa 18 amin’ny 100 no nisy tsy fahampiana kely teto Antananarivo Renivohitra ny faran’ny herinandro noho ny fahataran’ny famatsiana avy amin’ny fiarabe, izay no nampikoropaka ny olona teto an-drenivohitra sy tao Toliara ary koa Toamasina.
Amin’ny 25 oktobra 2019 ho avy izao no tonga ao Toamasina ny sambo be mpitondra solika na « tanker ».
(Jreo Sary Tohiny)
lundi, 21 octobre 2019 14:00
Tana Masoandro : Manohana ny tolon’ Ambohitrimajaka ireo Malagasy atsy La Réunion
Maneho firaisam-po sy firaisan-tsaina ho an'ny mponin'Ambohitrimanjaka ireto Malagasy mila ravinahitra atsy amin’ny Nosy La Réunion.
« Atsaharo tsy misy hatak'andro ny fanotofana tany ! Atsaharo ny asa fanombohana sy ny fananganana ny Tanamasoandro eo Ambohitrimajaka ! Atsaharo ny fandatsahan-dra ny vahoaka sy ny fampiharana ny hery setra ! Aza esorina amin'ny Tanindrazany ny mponina ao Ambohitrimanjaka. Aza atao sesitany ny mpiray Tanindrazana satria tsy nisy heloka vitany. Midadasika i Madagasikara ka maro ny toeran-kafa tsy misy mponina, azo anorenana Tanamasoandro », hoy ny fanehoan-kevitr’izy ireo nandritra ny fihaonana fanohanana ny tolon'ny Vahoakan'Ambohitrimanjaka, notontosaina ny alahady 20 oktobra 2019.
lundi, 21 octobre 2019 13:50
PARAMEDY: Hanao zaikabe nasionaly any Mahajanga
Hotanterahina eto Mahajanga, renivohitry ny Faritra Boeny, ny 21 hatramin'ny 25 oktobra 2019 ny zaikabe nasionalin’ny Paramedy.
Maro ireo hetsika ara-pahasalamana, ara-tsosialy, ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena izay hokarakarain'ny Paramedy mandritra io herinandro io, manodidina ny lohahevitra hoe: « Paramedy, antoka sy andry iankinan'ny Fahasalamam-bahoaka » nosafidian’ny mpikarakara tamin’ity taona 2019 ity.
Hankalazaina mandritra io fihaonana io ny faha-10 Taonan'ny Sendikan'ny Infirmiera sy ny Mpampivelona eto Madagasikara (SISFM), sy ny ny faha-15 Taonan'ny Fikambanan'ny Paramedy eto Madagasikara (APM). Havaozina ihany koa ireo mpikambana handrafitra ny Birao vaovao hitantana azy mandritra ny dimy taona manaraka.
Technologie: Girls Robotika Madagascar
Manantena ny fanohanantsika ara-moraly, indrindra ara-bola, ireo tanora vavitsika Malagasy hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena momba ny robotika atao any Armenia ny 9 novambra ho avy izao.
Merci de soutenir nos jeunes filles pour le concours mondial en robotique Armenia 9 novembre 2019.
Vos encouragements sont les bienvenus mais surtout, elles ont besoin d'argent pour y aller.
(Voir Photos Suite)